RW Britain Theresa May oo sheegtay in doorasho guud oo deg deg ah la qabto 8-da June - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldRW Britain Theresa May oo sheegtay in doorasho guud oo deg deg ah la qabto 8-da June
April 18, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Raysul Wasaaraha Britain Theresa May oo warbaahinta kula hadlay 10 Downing Street oo Britain looga arrimiyo. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
London-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa bayaanisay in doorasho guud oo deg deg ah la qabto 8-da bisha June ee sanadkan 2017-ka, ogeysiin la yaab lahayd oo ay sheegtay maanta oo Talaado ah iyadoo Britain ay isku diyaarinayso wadahadalada ka bixitaanka Midowga Yurub.
May ayaa sheegtay in maalinta Khamiista ay tagi doonto baarlamaanka si deg deg loo fuliyo doorashada.
“Waxaanu u baahanahay doorasho guud hadda ayaana rabnaa. Kahor inta aysan bilaaban wadahadaladu,” May ayaa sidaa tiri iyada oo ka hadlaysay irida hore ee 10 Downing Street oo Britain looga arrimiyo.
“Waxaan go’aansaday in wadada keliya ee damaanadqaadaysa hubinta iyo xasiloonida sanado badan oo soo wajahan ay tahay qabashada doorasho,” intaas ayay ku dartay.
May ayaa noqotay Raysulwasaare bartamihii bishii July ee sanadkii hore iyada oo aan doorasho ku guuleysan markii uu iscasilay David Cameron kadib malaayiin reer Britain ah markii ay kasoo horjeesteen taladiisii ahayd ku baaqi ahaanshaha Midowga Yurub ayna u codeeyeen in Midowga Yurub laga baxo.
Theresa May horey waxay u sheegtay in aysan jiri dooni doorasho hore oo la qaban doono inta ay xafiiska joogto.
Mareykanka oo duqeyn kale oo ka dhacday Puntland ku dilay afar dagaalyahan oo ISIS ah
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay maanta oo Jimce ah in duqeyn ay ka geysteen Buuraha Golis ee Puntland ay ku dileen afar dagaalyahan oo katirsan ISIS. Duqeynta ayaa dhacday Khamiistii, [...]